MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardဇွန် 2018 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT က သုံးစွဲသူများအတွက် ထောင်ပေါင်းများစွာသော မြန်မာရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်းများစွာကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများမှတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည့် မဟာမိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းကို ယူဆောင်လာပြီ
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်) – မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ MPTက မဟာမိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်း နှင့် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့သတင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ အဆိုပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရ MPT ဖုန်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဟာသ၊ ဒရမ်မာ၊ အချစ်၊ အက်ရှင် နှင့် သည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်စေမည့် ရသများ ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အမျိုးအစား စုံလင်သော မြန်မာရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်းပေါင်းများစွာကို အသက်သာဆုံးနှုန်းထား ဖြစ်သည့် တစ်ကားလျှင် ၉၉ ကျပ် နှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ပရိုမိုရှင်း ကာလအတွင်း ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ MPT ဖုန်းသုံးစွဲသူများ နှင့် မြန်မာရုပ်ရှင်/ဗွီဒီယိုချစ်သူများအနေဖြင့် အဆိုပါ အထူးသီးသန့်ဖျော်ဖြေရေး အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သော မဟာမိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းများကို မိမိတို့၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင် တော့မည် ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည် မဟာမိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ပြီး MPT ဖုန်းနံပါတ်အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းလမ်းများဖြစ်သည့် အီးမေးလ်အကောင့် နှင့် Facebook အကောင့်တို့ဖြင့် ဖြစ်စေ စာရင်းသွင်းရုံဖြင့် အမျိုးအစားစုံလင်လှသော မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကမ္ဘာသို့ ဝင်ရောက် နိုင်မည်ဖြစ်ကာ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာဇာတ်လမ်းများကို အွန်လိုင်းပေါ်မှ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ရုပ်ရှင်/ဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်းများကို ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်၍ (၇) ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ထားသည့် ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ဖုန်းအတွင်းသိမ်းဆည်းရန်အတွက် မိမိဖုန်းတွင် သိုလှောင်မှုပမာဏ ပျမ်းမျှ 330 MB လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ မဟာမိုဘိုင်းလ် အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုသူအားလုံးအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ရုပ်ရှင်/ဗွီဒီယိုအချို့ကို အခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း MPT ဖုန်းသုံးစွဲသူများသာလျှင် အက်ပလီကေးရှင်း၏ ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံကို ခံစားရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာရုပ်ရှင်/ဗွီဒီယိုချစ်သူများသည် ဇာတ်လမ်းအသစ်များ နှင့် ခေတ်ဟောင်းဂန္တဝင်ဇာတ်လမ်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့် ပရိုမိုးရှင်းကာလ (ဇွန်လ ၂၇ ရက်မှ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်) အတွင်း ရုပ်ရှင်/ဗွီဒီယို တစ်ကားလျှင် သက်သာသော နှုန်းထားဖြစ်သည့် ၉၉ ကျပ် နှုန်းဖြင့် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကာလကျော်လွန်သွားပါက ပုံမှန်နှုန်းထားဖြစ်သော တစ်ကားလျှင် ၁၅၀ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်း ကဲ့သို့သော နောက်ဆက်တွဲ ဒေတာအသုံးပြုမှုများအတွက်မူ အသုံးပြုသည့်ပမာဏအလိုက်ကျသင့်သော အစီအစဉ် (Pay-As-You-Go) (သို့မဟုတ်) ဝယ်ယူထားသည့် ဒေတာပက်ကေ့ချ်များအလိုက် ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operations စီးပွားရေးဌာနကြီး၏ အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “ကျွန်တော်တို့ MPT က သုံးစွဲသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အမြဲစဉ်းစားပေးနေတယ် ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ သုံးစွဲသူတွေကိုပါ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်းတင်ဆက်မှုတွေကို တစ်ဝကြီး ကြည့်ရှုခံစား နိုင်စေမယ့် မဟာမိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းကို သုံးစွဲသူတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်း တကယ်ကိုပဲ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ အခုလို ပြည်တွင်းဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကို သုံးစွဲသူတွေရဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေကနေတစ်ဆင့် အရောက်ပို့ဆောင်ပေးသလိုပဲ နေရာဒေသအသီးသီးမှာ နေထိုင် ကြတဲ့ MPT ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေရဲ့ နေထိုင်မှုဘဝတွေ ပိုပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလာအောင် ပိုပိုပြီး အသုံးဝင်စေမယ့် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း ထပ်ပြီးပေးအပ်သွားမယ်လို့ ကတိပြု ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ABC Content Solutions ကုမ္ပဏီလီမိတက် (မဟာ) ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးဝင်းခိုင်က “မြန်မာနိုင်ငံက အရွယ်စုံပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်/ဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေကို MPT နဲ့ အတူလက်တွဲပြီး သုံးစွဲသူတွေဆီ ယူဆောင်လာပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် တကယ်ပဲဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်မူထူးခြားတဲ့ မဟာမိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းက နောက်ဆုံးထွက် နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေအပြင် လူတိုင်းနှစ်သက်ခဲ့ကြတဲ့ ခေတ်ဟောင်းဂန္တဝင် ဇာတ်လမ်းတွေကိုပါ နေရာဒေသမရွေး၊ အချိန်မရွေး ခံစားကြည့်ရှုနိုင်အောင် ကူညီပေးသွားမှာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင် အဆိုပါအက်ပလီကေးရှင်းကို android ဖုန်းသုံးစွဲသူများသာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လိုတရ portal (http://mh.lotayamm.com/) မှတစ်ဆင့် ဒေတာကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်နိုင်မည့်အပြင် Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abccontent.mahartv) မှလည်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲကာ ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မဟာမိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် android version 5.0 နှင့် အထက်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် iOS အသုံးပြုသူများ အတွက်လည်း Apple Store တွင် မကြာခင် ရရှိနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
မဟာမိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်း ပိုမိုပြည့်စုံစွာ သိရှိလိုပါက MPT call center နံပါတ် 106 နှင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ ၀၉-၄၅၅ ၅၀၀ ၄၄၀ သို့မဟုတ် ၀၉ ၄၅၅ ၅၀၀ ၈၈၀ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇွန် 27, 2018 ဇွန် 27, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT က မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး အွန်လိုင်းဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် အဓိက ကူညီပံ့ပိုး
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ ရက်)- မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ MPT က မကြာမီစတင်တော့မည့် e-game ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည့် “MOBILE LEGENDS: BANG BANG SOUTH EAST ASIA CUP 2018 MYANMAR MPT QUALIFIER” တွင် မိတ်ဖက်အဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာပါဝင်လိုက်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ လူကြိုက်များပြီး လူအများစုပေါင်း ကစားနိုင်သည့် အခမဲ့ ရယူနိုင်သော အွန်လိုင်းတိုက်ပွဲ (MOBA) ဂိမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ကစားသမား တစ်သန်းကျော်က နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစားနေကြခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအသင်းအား ရွေးချယ်မည့် ပွဲစဉ်ကို ၇ ရက်ကြာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပထမအဆင့် အွန်လိုင်း ပွစဲ ဉ်များမှာ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းချန်ပီယံပွဲစဉ်များကို ရန်ကုန်မြို့ Junction Square ရှော့ပင်းမောလ်၌ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နှင့် ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး MPT သုံးစွဲသူများအတွက် သီးသန့်အထူးကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်နေ့အတွင်း ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် လူကြိုက်များသည့် Hero & Skin Bundle နှင့် အခြားသော အမိုက်စား Bundle များအပါအဝင် ဂိမ်းအတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် in-game vouchers များကို ဆုလက်ဆောင်အဖြစ် MPT သုံးစွဲသူ ၄,၀၀၀ ကျော်တို့အတွက် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ကာ MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ဘဲ ပါဝင် ကံစမ်းခွင့်ရမည် ဖြစ်သည်။ Coda Shop တွင် ၅,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ပမာဏအား အသုံးပြုသည့်အကြိမ် တိုင်းအတွက် နေ့စဉ်ပေးအပ်နေသည့် ဆုမဲပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ကို ကံစမ်းနိုင်မည့် အခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်စီ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “MPTရဲ့ LTE+ လို မြန်နှုန်းမြင့်ကွန်ရက်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုနိုင်လာတာနဲ့အမျှ အထူးသဖြင့် မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းကစားခြင်းဟာ လူငယ်တွေအကြားမှာ ရေပန်းစားလာပါပြီ။ နိုင်ငံအတွင်းက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ အွန်လိုင်းဂိမ်း အဖွဲ့အစည်းတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံထဲက အကြီးမားဆုံး e-gaming ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “MOBILE LEGENDS: BANG BANG SOUTH EAST ASIA CUP 2018 MYANMAR MPT QUALIFIER” ပွဲမှာ အခုလို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အထူးပဲဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်း အခုလိုမျိုး ပွဲကတစ်ဆင့် အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပြီး ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ကျင်းပမဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အလံကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာနဲ့ လွှင့်တင်နိုင်မယ့်နေရာတစ်နေရာရလာအောင် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်တော့ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲက စပါပြီ” ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
Mobile Legends: Bang Bang ကို iOS နှင့် Android အသုံးပြုသူအားလုံး အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး ကစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Call Center နံပါတ် ၁၀၆ သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ နံပါတ်များဖြစ်သည့် ၀၉-၄၅၅၅၀၀၄၄၀၊ ၀၉-၄၅၅၅၀၀၈၈၀ နှင့် MPT တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ www.facebook.com/mptofficialpage/ များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇွန် 25, 2018 ဇွန် 25, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှု အထူးနှစ်ခြိုက်သူများအတွက် MPT က Social Packs ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် နှုန်းထားအသစ်သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ၂၅ ရက်) – မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ MPT က Facebook, Messenger, Viber, LINE နှင့် Instagram တို့အပါအဝင် သုံးစွဲသူများကြိုက်နှစ်သက်သည့် ဆိုရှယ်မီဒီယာများကို သက်သာသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် သုံးစွဲနိုင်စေရန် Social Packs နှုန်းထားအသစ်များကို ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ဈေးနှုန်းအသစ်ပြောင်းလဲထားသည့် Social Packs တွင် အနည်းဆုံးနှုန်းထားအဖြစ် 190MB လျှင် ၁၉၉ ကျပ်သာ ကျသင့်ကာ နှစ်ရက်တာအထိ အသုံးပြုခွင့်ရရှိမည့် ပက်ကေ့ချ် မှစတင်ကာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ စီးပွားရေးဌာနကြီးမှအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ MPT ရဲ့ LTE+ ကွန်ရက်ပေါ်မှာ မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနေကြတဲ့ သုံးစွဲသူတွေနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူပမာဏက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးမြင့်လာနေပါပြီ။ အစဉ်တစိုက်အားပေးလာကြတဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ MPT အနေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေအကြိုက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အရာတွေ၊ လူကြိုက်များတဲ့ကဏ္ဍတွေကို စိတ်ဝင်တစား အသုံးပြုမှုအပေါ်ကို လိုက်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ အတွေ့အကြုံတွေကို ပိုပြီးခံစားနိုင်စေမယ့် သက်သာတဲ့နှုန်းထားနဲ့ ဒီ Social Packs တွေကြောင့် သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုတွေနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာ အရင်ကထက် ပိုပြီး အဆင်ပြေတော့မှာ ဖြစ်လို့ MPT အနေနဲ့ အထူးပဲ ကျေနပ်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
MPTသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက် သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် သတ် မှတ်ထားသော ဒေတာပမာဏများအလိုက် ၂ ရက်၊ ၇ ရက်၊ ၃၀ ရက် ပက်ကေ့ချ်များအဖြစ် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပက်ကေ့ချ်အသစ်များက ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူများအတွက် ကျေနပ်မှု ပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး MPT ၏ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကျယ်ပြန့်စွာ ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ရက်ပေါ်မှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့စိတ်ကြိုက် အက်ပလီကေးရှင်းများကို ရယူသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT GSM/WCDM၊ ဆွေသဟာ၊ ရှယ်ပြော၊ ရွှေစကား သုံးစွဲသူများ ရယူနိုင်မည့် Social Packs အသစ်များ
Social Packs ဈေးနှုန်း (ကျပ်) (ကုန်သွယ်ခွန်ပါဝင်ပြီး) ဒေတာပမာဏ (MB) ပက်ကေ့ချ် တစ်ခုချင်းစီ ရယူရန် တိုက်ရိုက် ရယူရန်
၂ ရက်စာ ပက်ကေ့ချ် ၁၉၉ ကျပ် 190 MB *3001# သို့ ခေါ်ဆိုပါ
*3333# သို့ ခေါ်ဆိုပါ
၇ ရက်စာ ပက်ကေ့ချ် ၉၉၉ ကျပ် 950 MB *3002# သို့ ခေါ်ဆိုပါ
ရက် ၃၀ စာ ပက်ကေ့ချ် ၂,၉၉၉ ကျပ် 2,850 MB *3003# သို့ ခေါ်ဆိုပါ
*သတ်မှတ်ထားသည့် ဒေတာပမာဏထိ အသုံးပြုပြီးပါက ပုံမှန်နှုန်းထား (PAY-AS-You-Go) သို့မဟုတ် Data Pack နှုန်းထားများဖြင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
MPT ၏ Social Packs အသစ်များနှင့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုပါ Call Center နံပါတ် ၁၀၆ သို့မဟုတ် တရားဝင် Facebook Page www.facebook.com/mptofficialpage/ တွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
MPT မှ ငွေတောင်းခံလွှာများကို KBZ ၊ CB ဘဏ်ခွဲများအပြင် Mobile Banking စနစ် မှတစ်ဆင့် ပေးဆောင်နိုင်ပြီ
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်) – မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ MPT က သုံးစွဲသူများအတွက် MPT ဖုန်းဘီလ်ပေးဆောင်ရာတွင် ယခင်ကထက် ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဇွန်လမှ စတင်၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ KBZ နှင့် CB ဘဏ်တို့၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းလ်ငွေကြေးစနစ်ဖြစ်သည့် Mobile Banking စနစ်ကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ ပေးချေဆောင်ရွက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ကြိုးဖုန်းများ၊ ADSL နှင့် FTTH အပါအဝင် postpaid mobile (အသုံးပြုပြီးမှပေးချေသည့် စနစ်သုံး) မိုဘိုင်းလ်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် MPTမှထုတ်ပေးသည့် ပြေစာကို စာရွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) မိမိတို့၏ ဖုန်းနှင့် အခြားအီလက်ထရောနစ် စက်ပစ္စည်းများအတွင်း သိမ်းဆည်း၍ဖြစ်စေ ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ်သို့ ချက်လက်မှတ် (သို့) ငွေသားဖြင့် ပေးသွင်းပါက သတ်မှတ်ထားသည့်ဘဏ်များမှ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင် ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များ၏ Mobile Banking စနစ်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်လည်း ၎င်းတို့၏ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်များရှိ Mobile Banking အက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေမှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ငွေပေးချေမှုဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတို့၏ ဘဏ်အကောင့်များသို့ ဝင်ရောက်ကာ MPT ၏ ဖုန်းဘီလ်အတွက် သင့်လျော်သည့်ပေးချေမှုပုံစံကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် လိုအပ်သည့် အချက်အလက် အသေးစိတ် (သုံးစွဲသူကုတ်နံပါတ်၊ ပြေစာနံပါတ်၊ ပေးချေရန်ပမာဏ) အစရှိသည်တို့ကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းပြီး ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အပြီးသတ်လုပ်ဆောင်ပြီး ငွေပေးချေမှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ပုံ – MPT ၏ အသုံးပြုပြီးမှပေးချေသည့်စနစ်သုံး ပြေစာ နမူနာ။ ဘယ်ဘက်ထိပ်တွင် MPT တံဆိပ်နှင့် ညာဘက်ထိပ်တွင် QR Code ပါသည့် ပြေစာများသာလျှင် ငွေပေးချေမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ငွေပေးချေမှုအပိုင်းမှာ ပိုပြီး အဆင်ပြေလွယ်ကူစေဖို့အတွက် KBZ ဘဏ်၊ CB ဘဏ်တို့နဲ့အတူ လက်တွဲပြီး ငွေပေးချေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပိုများလာအောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ ဘဏ်ခွဲ ၇၀၀ ကျော်တွေရဲ့ ကွန်ရက်တွေနဲ့ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကြောင့် သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ မြန်ဆန်လွယ်ကူတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MPT အနေနဲ့ Postpaid ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးအပ်ရာမှာ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကို ပေးစွမ်း သွားမယ်လို့ ဒီနေရာကနေ ပြောကြားချင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကောင်းတွေရရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က ပြောသည်။
ထို့အပြင် Mobile Banking စနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘဏ်ခွဲများမှ တစ်ဆင့်လည်းကောင်း ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ် ရာတွင် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးသွင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ အခမဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MPT ၏ FTTH နှင့် ADSL ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက 106 (သို့မဟုတ်) MPT ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် http://mpt.com.mm/mm/ (သို့မဟုတ်) Facebook စာမျက်နှာဖြစ်သည့် www.facebook.com/mptofficialpage တို့တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် KBZ နှင့် CB ဘဏ်တို့၏ Mobile Banking ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်များထံသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇွန် 22, 2018 ဇွန် 22, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
Payment Through Bank Channel FAQs MM
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇွန် 21, 2018 ဇွန် 22, 2018 Categories Personal Pagemm
Payment Bank Channel
Payment Through Bank Channel အသစ်ဆိုတာဘာလဲ
MPT မှ FTTH ဘေလ်အပါအဝင် အခြား လိုင်းဖုန်းဘေလ်များ , ADSL , postpaid (အသုံးပြုပြီးမှပေးဆောင်ရသော) mobile phone ဘေလ်များအားလုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို လက်ရှိပေးဆောင်နေသော TRA counter ၊ MEB online payment၊ CB၊ KBZ BANK နှင့် MPT မှသတ်မှတ်ထားသော တယ်လီဖုန်းဌာန များတွင်သာမက MEB နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော CITY MART၊ JUNCTION၊ OCEAN၊ SUPERONE၊ MYANMA APEX BANK ၊ UNITED LIVING MALL စသည့် ဈေးဝယ်စင်တာများမှတဆင့်လည်း လွယ်ကူစွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
ငွေပေးချေမှုပြူလုပ်နိုင်သော MPT TRA ကောင်တာများ
REGION TRA NAME ADDRESS
YANGON Cities SULE NO, 465,469 , Conner Of the Mahabandoola St & Bosunpat St , Pabedan T/s.
YANGON Cities GPO NO,39 , Conner Of the Kannar St & Bo Aung Kyaw St , Kyauktada T/s.
YANGON Cities Ahlone NO, 189, Lower Kyimyindine Rd , Ahlone T/s.
YANGON Cities 40th Street NO. 103 , 40 st , Middle Blk , Kyauktada T/s.
YANGON Cities Thingangyun Exchange Ground, 16th QR, Part 4, Thumingalar St, Thingangyun T/s.
YANGON Cities Inn Sein No.2 , Hlaing River St , East Ywarma, Insein Post Ground. Insein T/s.
YANGON Cities Mayangone Exchange Ground, kabaraye Pagoda Rd,5th Qr, Mayangone T/s
YANGON Cities Tarmwe No.101 , Banyadala Rd, Tamwe Post , Tamwe/Ts.
YANGON Cities Hlaing No.5 , 9th Qr, Yangon-Insein Rd , Hlaing T/s
YANGON Cities Shwegondine No. 74 , East Shwegonedaing Rd , Bahan T/s.
YANGON Cities Pansodan No.125 , Conner of the Mahabandoola Rd & Pansoedan Rd , Kyauktada T/s.
YANGON Cities Sawbwargyigone Kyauksein Lanmagyi & Kyauksein 5th St Top , Sawbwargyigone Ground , Insein T/s .
MANDALAY Mandalay Regional Manager Office, MPT, Between 25th street and 80*81 street, Aungmyaytharzan Township, Mandalay
Naypyitaw Naypyidaw TRA, Central Postoffice, Naypyitaw
MANDALAY Myingyan NO,313,7QR, WEST Ayemyathida Zay, Myingyan
MAGWAY Magway TRA, Regional Manager Office, Lane 5, Magway
ငွေပေးချေမှုပြူလုပ်နိုင်သော BANK များ
CB Any CB bank branch over the counter and through mobile banking
Mobile/Internet banking မှတဆင့် ငွေပေးချေရန်အတွက် KBZ နဲ့ CB ဘဏ်များတွင် ဘဏ်စာရင်းရှိပြီး Mobile/Internet Banking အကောင့်ချိတ်ဆက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
KBZ mobile banking ဖြင့်ဘေလ်ပေးဆောင်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
CB mobile banking ဖြင့်ဘေလ်ပေးဆောင်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
KBZ ဘဏ် Mobile Banking အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များအား (Link) တွင်စစ်ဆေးပါ။
CB ဘဏ် Mobile Banking အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များအား (Link) တွင်စစ်ဆေးပါ။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇွန် 21, 2018 အောက်တိုဘာ 14, 2020 Categories Personal Pagemm
BalloneStar Promotion FAQs MM
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇွန် 13, 2018 ဇွန် 14, 2018 Categories Uncategorized
MPT က ဘောလုံးစတားအက်ပလီကေးရှင်းသုံးစွဲသူများအတွက် ကားအသစ်တစ်စီး ရယူနိုင်မည့် အထူးအစီအစဉ်ကို စတင်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်)- မြန်မာ့ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ MPT က ဘောလုံးချစ်သူ များအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဘောလုံးစတားအက်ပလီကေးရှင်း၏ အထူးအစီအစဉ်ကို ယနေ့စတင် မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ယခုကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် KIA Picanto 2018 မော်ဒယ် ကားအသစ် တစ်စီးကို ကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများအနေ နှင့် ပရိုမိုးရှင်းကာလဖြစ်သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ရက်မှ သြဂုတ် ၁၂ရက်နေ့အတွင်း MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဘောလုံးစတားအက်ပလီကေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုအား ရယူထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
MPT-KSGM Joint Opearations ၏ စီးပွားရေးရာဌာနကြီးမှ အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “ဘောလုံးစတားမိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုကြတဲ့ MPT ဘောလုံးချစ်သူတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်လို့ အရမ်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နိုင်ငံတကာက ဘောလုံးအသင်းတွေ၊ ကစားသမားတွေအကြောင်းတွေကို အမြဲမပြတ် ထိတွေ့နိုင်မှာဖြစ်သလို များပြားလှတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်ရှုခံစားရင်း KIA ကားအသစ် ပိုင်ဆိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကိုလည်း ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘောလုံးစတားအက်ပလီကေးရှင်း ဖန်တီးထားသည့် ထွဋ်ကုမ္ပဏီ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးဝေဖြိုးထွဋ်က “MPT နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ ဘောလုံးစတား အက်ပလီကေးရှင်းမှာ မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်း တွေကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ သက်တောင့်သက်သာ ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးစတားကို သုံးစွဲသူတွေ အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူသုံးနိုင်တဲ့ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးထားပါတယ်။ ပရိုမိုရှင်းအစီအစဉ်ကနေ တစ်ဆင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်မှာတင် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးသတင်းတွေကို ထူးထူးခြားခြားဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ ဆိုတာကို သုံးစွဲသူတွေ လေ့လာနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုဝန်ဆောင်မှုကို စတင်ရယူသူများအတွက် တစ်ပတ်တာအခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ကို ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရက်သတ္တပတ်ကျော်လွန်ပါက တစ်ရက်လျှင် ၁၀၅ကျပ်နှုန်းဖြင့် ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်အတွင်း ပါဝင်လိုသည့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းကာလတွင် တစ်ရက်တာဝန်ဆောင်မှုကို အနည်းဆုံး ၂၁ ကြိမ် (သို့မဟုတ်) တစ်ပတ်တာဝန်ဆောင်မှုကို အနည်းဆုံး ၃ကြိမ် (သို့မဟုတ်) စုစုပေါင်း ၂၁ရက်စာ ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူ၍ ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကံထူးရှင်ကို ပြင်ပရှိ လွတ်လပ်သော ပုဂ္ဂလိက စာရင်းစစ်အဖွဲ့ကတစ်ဆင့် MPT ရုံးချုပ်၌ ရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လကုန်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။
MPT သုံးစွဲသူများသာ သီးသန့်ရယူနိုင်မည့် ဘောလုံးစတားအက်ပလီကေးရှင်းမှာ ဘောလုံးအားကစားကိုနှစ်သက်ကြသူများ တစ်ထိုင်တည်းရယူအသုံးပြုနိုင်မည့် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု လည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအသင်းများ၊ ကစားသမားများနှင့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို အဆင်သင့် ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားပြီး လွယ်ကူရိုးရှင်းသည့်ပုံစံကြောင့် ဗီဒီယိုများ၊ ပွဲချိန်စာရင်း၊ ဒဏ်ရာရကစားသမား ဂိုးရလဒ်များနှင့် ပွဲကြိုခန့်မှန်းချက်များကဲ့သို့သော သီးသန့်အကြောင်းအရာများကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်တွင် အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Android သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဘောလုံးစတားအက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေတာသုံးစွဲရန်မလိုအပ်ဘဲ လိုတရ (http://bs.lotayamm.com/ )တွင် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 8118 သို့ “DL”ဟု SMS ပေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်း ဒေါင်းလုတ်လင့်ခ်ကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘောလုံးစတားအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိလိုပါက 106 သို့မဟုတ် Customer Service Team ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၅၅၅၀၀၄၄၀ သို့မဟုတ် ၀၉၄၅၅၅၀၀၈၈၀ သို့ ဆက်သွယ် ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇွန် 12, 2018 ဇွန် 13, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
နိုင်ငံ့အကောင်းဆုံးလိဂ်များအကြောင်းနှင့် ပြည်တွင်းဘောလုံးလောက၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ တိုးတက်မှုများ ကို ပရိသတ်များ ရှေ့မှောက်သို့ ဆောင်ယူလာပေးမည့် အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ကို Google Play စတိုးနှင့် MPT လိုတရ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ရုံသာမက *3101# သို့ခေါ်ဆို၍လည်း ဒေါင်းလုတ်လင့်ခ် ကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Continue reading “ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အမာခံ ဘောလုံးအားကစား ပရိသတ်များအတွက် MNL အသင်းများ၏ နောက်ဆုံးရသတင်းများ၊ ဂိုးရလဒ်များနှင့် ပွဲစဉ်အခြေအနေများကို ဖော်ပြပေးမည့် အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ကို MPT စတင်မိတ်ဆက်”
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇွန် 5, 2018 ဇွန် 5, 2018 Categories Latest Newsmm, Press Releasesmm
MPT MNL Offer FAQs MM
PROMOTION » MPT MNL Offer
MPT MNL Offer
၁။ MPT MNL application ဆိုသည်မှာဘာလည်း။
MPT MNL application ဆိုသည်မှာ Myanmar National League ဘောလုံးပွဲနဲ့ပက်သက်သော အကြောင်းအရာများ၊ ပွဲစဉ်များ၊ သတင်းများ၊ များ၊ တိုက်ရိုက်ပွဲများ နှင့် အကြိုခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲများပါဝင်သော application တခုဖြစ်ပါသည်။
၂။ MPT MNL application ကိုဘယ်တော့စသုံးနိုင်မှာလည်း။
MPT MNL application ကို ၁ရက် ဇွန်လ ၂၀၁၈ မှစ၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၃။ Application အသုံးပြုခ ပေးရမှာလား။
Application အသုံးပြုခပေးစရာမလိုပါ။ Application အသုံးပြုနေစဉ် Internet အသုံးပြုခသာ ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ဒီ application ကို MPT customers/users များသာ အသုံးပြုလို့ရမှာလား။
MPT ၊ Telenor ၊ Ooredoo ၊ Mytel နှင့် WiFi users အားလုံးအသုံးပြုလို့ရပါသည်။
၅။ Application ကိုဘယ်ကနေ download လုပ်နိုင်ပါသလည်း။
Google play store, Apple store, MPT webpage, Lotaya application and USSD *3101# sms link မှ download လုပ်နိုင်ပါသည်။
၆။ Application မှာပါဝင်သော quiz & game အစီအစဉ် မှာဘာပါလည်း။
Quiz & Game အစီအစဉ်မှာ ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲများအားလုံးကို ခန့်မှန်းသော အစီအစဉ် တခုဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးမှန်မှအနိုင်ရရှိ၍ တပွဲမှားလျင်ရှုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Quiz & Game အစီအစဉ်မှာ MPT ဆင်းကဒ် အသုံးပြုသူများ အတွက်သာအကျုံးဝင်ပါသည်။
၇။ ဘောလုံးပွဲများကို ဘယ်နေ့တွေမှာ ကျင်းပ ပါသလည်း။
ဘောလုံးပွဲများကို စနေ နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျင်းပပါသည်။
၈။ ဒီ application တွင် ဘောလုံး ဘယ်နှစ်သင်းပါဝင်ပါသလည်း။
လုံးမှာ League 1 မှဖြစ်ပါသည်။
၉။ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲကို ဘယ်အချိန် မှ ဘယ်အချိန်ထိ ဝင်ရောက်ရွေးချယ်နိုင်မလည်း။
ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲ အသင်းများကို တနင်္လာနေ့ ည ၁၂မှ စ၍ စနေနေ့ နေ့လည် ၁၂ ထိ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
၁၀။ ဆုရသူများကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မှာလည်း။
Game winners များထဲမှ4ယောက်ကို ကံထူးရှင် ရွေးချယ်ဆုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲမှာ တပတ်စာ ၆ပွဲလုံး ခန့်မှန်းရပြီး အားလုံးမှန်မှ အနိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆုရသူစာရင်းကို ဖုန်းခေါ်ပြီး Facebook တွင်လည်းကြေငြာပေးပါမည်။
၁၂။ ဘာဆုတွေ ပေးမှာဘာလည်း။
ဆုများမှာ ငွေကြေးမဟုတ်သော ဘောလုံး အင်္ကျီ ၊ MNL အမှတ်တရ ငွေဖြည့်ကဒ် နှင့်အခြားအဖိုးတန် ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။ ဆုပစ္စည်း များသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနိုင်ပါပြီး MPT Facebook တွင်အချိန်နှင့်အမျှဖော်ပြပေးသွားပါမည်။
ဆုများကို တစ်လတစ်ခါ လကုန်ပိုင်းတွင်ပေးသွားပါမည် ကိုယ်တိုင်လာမယူနိုင်ပါက ဆုရရှိသူမှ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ နှင့် NRiC copy ကိုပြပြီး ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇွန် 5, 2018 ဇွန် 5, 2018 Categories Personal Pagemm